Yusuf Garaad: Hargeysa - Taxnaha 89 - 90 - Qaybta Toddobaad
Guri ay hey’addu degganeyd oo ku began xagga dambe ee halka ay Madaxtooyadu hadda tahay ayaan tegey. In yar ka dib gabbalka ayaa dhacay. Ma aqaan baqdin iyo waxa ay tahay - weligeey ma arag gudcur ama mugdi aan waxba ka arki waayo haddii aan nalka ka fogaado.
Waan murugooday. Inta qof rayid ah oo aan waxba galabsan meesha lagu dilay. Inta dad aan awoodin da', caafimaad ama xataa saboolnimo darteed ay dantu ku kalliftay in ay qaxaan. Ugu dambeynta waxaan dhibsaday awood darreyda ah in wax aan ka qaban karaa aanay jirin dhibaatada aan dhex taagan ahay.